Ny vokatry ny tsikera an-tserasera | Martech Zone
Nanomboka niara-niasa tamin'ny lisitr'i Angie izahay vao haingana ary efa manokatra maso ho anay ny isan'ny orinasa mahazo azy ireo naoty, hevitra ary fifanarahana. Ho an'ireo orinasa eo an-toerana izay manome serivisy lehibe ho an'ny mpanjifany, ny tombana amin'ny karama ao amin'ny Angie's List dia vola miditra madio.
Raha ny fanadihadiana nataon'ny Business Small Search Marketing Survey nataon'ny American Express OPEN, ny orinasa madinidinika amerikana dia mbola afaka miantehitra amin'ny vava am-bava ho fomba lehibe ahitan'ny mpiantsena azy ireo. Akaiky anefa ny Internet. Miankina betsaka amin'ny herin'ny motera fikarohana izao ny mpanjifa eo an-toerana rehefa miantsena eo an-toerana. Izahay dia mijery izay dikan'izany ho an'ny orinasa madinidinika.
Milo, ny mpikaroka vokatra an-tserasera, dia nametraka ity sary ity miaraka amin'ny herin'ny fanamarihana an-tserasera.
Tags: Lisitr'i Angietoekarena ao an-toeranaMiloFanamarihana an-tseraserahevitra
Fa maninona no tsy fantatrao hoe iza aho?
Miezaha mamaky ireo fitaovana mora foana amin'ny Adobe Shadow